लकडाउन अवधिमा ३० जना गर्भवती र सुत्केरी महिलाको मृत्यु – Rara Khabar
लकडाउन अवधिमा ३० जना गर्भवती र सुत्केरी महिलाको मृत्यु
मन्त्रालय अन्तर्गतको मातृ तथा नवशिशु शाखाका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो सङ्ख्या झण्डै चार गुणा ज्यादा हो ।
शाखाका प्रमुख डा. पुन्या पौडेलका अनुसार गतवर्ष यो अवधिमा ८ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाएका थिए ।
उनी भन्छिन्, लकडाउनको अवधिमा २८ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य संस्थामा पुगेपछि र दुई जनाको घरमै ज्यान गएको पाइएको छ ।
लकडाउनले गर्दा समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउन नसक्दा उनीहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको पनि उनले बताइन्।
लकडाउनको अवधिमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्याहार कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धी गाइडलाइन बनाएको हुँदा अब स्वास्थ्य सेवा सुलभ हुने दाबी मातृ तथा नवशिशु शाखाको छ।
घरमै सुत्केरी हुँन खोज्दा अछाम र बारामा एक-एक जना महिलाको ज्यान गएको बताइएको छ।
सुत्केरी तथा गर्भवतीको अवस्था नाजुक बन्न थालेपछि मात्रै स्वास्थ्य संस्था लैजाने प्रवृत्तिले गर्दा ज्यान जोखिममा पर्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।
सबै ठाउँका स्वास्थ्य केन्द्र सुविधायुक्त छैनन्। नर्मल डेलीभरी गाउँकै स्वास्थ्य संस्थामा हुने तर जटिल हुन वित्तिकै तुरुन्तै अस्पताल ल्याउनुपर्नेमा समयमै ल्याउन नसक्दा गर्भवती तथा सुत्केरीलाई बचाउन कठिन हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
कोहलपुर मेडिकल कलेजका निर्देशक कनोडिया भन्छन्, “जति ढिलो हुन्छ त्यति नै जोखिम बढ्छ । त्यसैले जटिलताका लक्षण देखिने वित्तिकै तुरन्तै सुविधायुक्त अस्पताल लगिहाल्नुपर्छ।”
उनी जति लकडाउन लम्बिन्छ त्यति नै गर्भवती तथा सुत्केरी महिला पनि जोखिममा पर्ने धारणा राख्छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म १३५ र गतबर्ष २०८ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाएका छन्।
यसपाली लकडाउन हुनुभन्दा अघि माघमा ८ र फागुनमा ११ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको मुत्यु भएको थियो।
लकडाउनको अवधिमा खासगरी गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू बढी जोखिममा परेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्।
सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था, बर्थिङ्ग सेन्टर भएपनि आवश्यक स्रोत साधन नहुँदा बाहिर रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाई छ। कोरोनाको डरले अस्पताल जाँदैनन् ।
कोरोना सङ्क्रमणको डरले कतिपय गर्भवती तथा सुत्केरी घरमै बस्नु परेकोले नियमित स्वास्थ्य चेकजाँचमा जान नपाएको गुनासो गर्छन् ।
लकडाउन शुरु भएपछि गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूले धेरै समस्या झेल्नु परिरहेको कालिकोटकी कुशुमकला महतरा बताउँछिन् ।
यही जेठ महिना बच्चा जन्मिने मिति छ, उनी भन्छिन, तर कोरोनाको डरले गर्दा लकडाउनका बेला गर्भजाँच गर्न अस्पताल गएको छैन। भिटामिन, क्याल्सियम र पोषिलो खानेकुरा पनि पाइएको छैन।
गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा जुनसुकै बेला पनि जोखिम आउन सक्ने भएकोले पूर्व सावधानी अपनाउनु पर्ने चिकित्सहरू सल्लाह दिन्छन् ।
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. केशर ढकाल अहिले सङ्क्रमणको उच्च जोखिम भएकोले खासगरी गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले खानेकुरा, सरसफाइ, नियमित स्वास्थ्य चेकजाँचमा विशेष ख्याल राख्नु पर्ने बताउँछन् ।
लकडाउनको समयमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरीको लागि हवाई सेवा झन् बढी प्रभावकारी देखिएको छ ।
यो अवधिमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका १४ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी बचाएको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ढुंगाना भन्छिन्, सडक सञ्जालसँग जोडिएका तर लकडाउनले गर्दा गाडीहरू नचलेका विभिन्न ठाउँबाट पनि उद्धारको लागि आग्रह गरिएको थियो तर कार्यविधिमा नसमेटिएको हुनाले उद्धार गर्न सकिएन।
गत वर्षदेखि सुरु भएको हवाई उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म जोखिम अवस्थाका १०३ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरिएको उनी बताउँछिन्।
लकडाउनकै बेला पनि हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएका मध्ये दुई जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले ज्यान गएको देखिन्छ।
लकडाउनको समयमा सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई कतिपय स्थानीय तहले पोषणयुक्त खानेकुरा बाँड्ने, स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गर्न जान प्रेरित गर्ने गर्दै आएको बताउँछन्।(बीबीसीबाट)
प्रकाशित मितिः १७ जेष्ठ २०७७, शनिबार ११:२४